नेपाली मितिः वि.सं. २०७५ । नेपाल सं. ११३८ । योग सं. ३९ । ज्येष्ठ महिनाको ९ गते बुधवार ।
अँग्रजी मितिः ई.सं. २०१८ मे महिनाको २३ तारिख ।
तिथीः उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु अधिकज्येष्ठशुक्ल पक्षको नवमी तिथि, २२ः०७ बजेपछि दशमी तिथि ।
योगः हर्षण योग ।
नक्षत्रः पूर्वफाल्गुनी नक्षत्र, २२ः५५ बजेपछि उत्तरफाल्गुनी नक्षत्र ।
करणः बालव करण, ११ः०२ बजे उपरान्त कौलव करण ।
काठमाडौंमा सूर्यास्तः १८ः४९ बजे ।
राहुकालः १२ः०१ बजेपछि १३ः४३ बजेसम्म ।
यात्राः राहुकाल र अशुभबेला छाडी, शुभमुहूर्त पारी ईशान दिशाको लागि उपयुक्त ।
मेष राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन ज्ञानशक्ति तथा विद्याको अहं बढ्नसक्ने छ, गोचरले त्यति साथ दिएको देखिँदैन । पहिला फुर्ति र पछि पछुतो पर्नसक्ने छ, काम फत्ते नभई व्यक्त नगरेकै राम्रो हुनेछ । मान्छेहरुको झ्यास्सै विश्वास गर्नाले पश्चाताप पर्नसक्ने सम्भावना छ होसियारी अप्नाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । भाका तथा आश्वासन पूरा हुन गार्हो परेपनि संयमपूर्वक स्वाध्याय तथा स्वकार्यरत रहनाले लगनशीलता तथा धैर्यताको फलस्वरुप केही उपलब्धि मिल्नसक्ने छ । आज यहाँलाई पाँच अङ्क, रातो एवं सेतो रङ्गको प्रयोग गर्नु लाभदायक हुनेछ ।
मिथुन राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन आँटिलो एवम् साहसिलो हुँदाहुँदै पनि केही अबरोधको सामना गर्नपर्ने देखिएको छ । त्यसको बाबजुतपनि पुरुषार्थ बढ्ने र राम्रो उद्यम सम्पादन गर्ने जमर्को हुनेछ । विशेष काम बनाउन सूर्यदेवलाई खुशी बनाउने उपाय अवलम्बन गर्नु मनासिव हुनेछ । कामकार्यमा रुचि बढ्ने छ । शुभचिन्तकसँग भेटघाट हुने तथा सहयोग पनि जुट्ने छ । प्रतिस्पर्धा जन्य काममा पनि अग्रता हासिल गर्नसकिने छ । तीन अंक र हरियो रङ्ग फापसिद्ध रहने छ ।
कर्कट राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन सामानयतया सकारात्मक मान्नसकिन्छ । तथापि केही अदृष्य रोकावटको सामना गर्नपर्ने तथा विरोधाभाष स्थितिको सामना गर्नपर्ने गोचर देखिएको छ । बोलीवचनले खासै महत्त्व नपाउनसक्ने पछि छ । आर्थिक क्षेत्रमा केही संघर्षको सामना पछि अनुकूल हुनेछ । परोपकार एवम् समाजसेवाका कार्यमा पनि सरिक हुने मौका मिल्नसक्ने छ । नाता–कुटुम्बिक सम्बन्धमा भने अल्लि संयमपूर्वक व्यवहार गर्नु पर्ला । सञ्चित धनको अपव्यय हुनसक्ने छ ख्यालपुर्याउनु होला । आज तपाईको लागि दुई अंक, सेतो रंगको प्रयोग शुभ रहने छ ।
सिंह राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन दिनलाई सकारात्मक नै लिनुपर्छ तथापि गोचर केही बाधक अबस्था देखिएको छ । रपनि ईज्जत तथा मानप्रतिष्ठामा विकास हुनेछ । दिन मनोरञ्जन एवम् खुशीयालीप्रद रहने छ । मनोवाञ्छित स्वादिष्ट भोजनद्वारा स्वागत सत्कार मिल्नसक्ने छ । इष्टमित्रको आगमन हुने र कोसेली आदि पनि मिल्नसक्ने छ भने पारिवारिक सौहार्दता बढ्ने छ । नयाँकाममा लगानीको बारेमा विचारविमर्श हुनसकने छ । पेशागत कामकार्यमा लाभ एवम् सफलता प्राप्त हुनेछ । प्रेमसम्बन्ध गाँसिने तथा जोडिएको सम्बन्ध मज्बुत बन्नेछ । आज यहाँलाई एक अङ्क, रातो रङ्गको प्रयोग फापकर हुनसक्नेछ ।
कन्या राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन प्रतिकूलता बढ्नसक्ने खालको गोचर परेको छ । कामकार्यमा बढी हतार नगर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ अन्यथा खर्च बढ्ने सम्भावना रहनेछ । विषय तथा कार्य नबुझि अघि बढ्नाले पश्चाताप पर्नसक्ने छ, ख्याल गर्नु होला । केही संघर्ष एवं प्रतिकूलताको बाबजुत सोँच एवं योजना नभएको तर्फबाट आकस्मिक आयआर्जन तथा उपलब्धि हुनसक्ने छ । देशविदेशको यात्रा हुनसक्ने छ । दानदातव्य एवं मान्यजनको दर्शनभेट आदिको लागि पनि दिन उपयुक्त रहेको छ । आज यहाँलाई रातो रङ्ग, पाँच अङ्कको उपयोग शुभकर हुनेछ ।
तुला राशिहुनेहरुको लागि आजको दिन प्रतिस्पर्धामा विजय र प्रख्याति मिल्ने दिन छ । पेशा तथा व्यवसायिक कार्यबाट आर्थिक लाभ गर्न सकिने छ । अध्यनअध्यापन एवं सन्तानको पक्षबाट पनि सन्तोष लिनसकिने छ । दिनको सदुपयोग गर्ने र अधुरा रहेका कामहरुलाई पूर्णता दिने गरी स्वकार्यलाई समय दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । विवाह योग्य युवायुवतीको विवाह प्रसङ्ग चल्नसक्ने सम्भावना पनि छ भने प्रेमाभिलाषिहरुको लागि प्रेमसम्बन्ध जोडिनसक्ने पनि सम्भावना छ । आज यहाँलाई दुई अङ्क, सेतो रङ्गको उपयोग फापकर हुनेछ ।
वृश्चिक राशिहुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन ईज्जत प्रतिष्ठा एवम् प्रख्याति बढ्ने देखिएको छ । पेशा एवम् व्यवसायिक क्षेत्रबाट राम्रो लाभ गर्नसकिने छ । तार्किक क्षमता बढ्ने र प्रतिस्पर्धामा सफलता मिल्नेछ । सन्तानको पक्षबाट पनि सन्तोष प्राप्त हुने र अधुरा रहेका केही कामहरुलाई पूरा गर्नसकिने छ । राजनीति एवम् समाजसेवा जन्य कामबाट पनि प्रसिद्धि कमाउन सकिनेछ । सम्बन्धितहरुको लागि प्रेम वा विवाह प्रस्तावको पनि सम्भावना छ ।
धनु राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन पाएको आश्वासन काम नलाग्न वा पूरा हुन कठिन छ । महत्त्वाकांक्षा ठूलै भएपनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुनलाई ग्रहबाधा देखिएको छ । तथापि धार्मिक–आध्यात्मिक वातावरण एवं चिन्तनमनन् भने सृजना हुनसक्ने छ । सामान्यतया दैनिक रुपमा चलिरहेका व्यवहारिक कामकार्य आदिबाट लाभ हातपार्न सकिने छ । उच्चवर्गसँग संपर्क स्थापित हुनजाँदा केही महत्त्वाकांक्षा पनि बढ्नसक्ने छ । जसले मनोबल पनि उच्च बनाउने छ । प्रेमसम्बन्धमा नयाँ पन आउनेछ । विवाह प्रस्तावले प्रसय पाउने छ । आज यहाँको लागि नौ अङ्क, पहेंलो रङ्गको प्रयोग गर्नु फापसिद्ध हुनेछ ।
मकर राशिहुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन त्यति अनुकूल मान्न अल्लि नसकिने देखिएको छ । खोजेको काममा अबरोध आउने र बरु महत्त्व नपाएको काम बन्नसक्ने छ । चन्द्रमा लगाएतका ग्रहहरुको प्रतिकूल अवस्थाले यहाँको स्वास्थ्य र गर्न लागेको कार्यमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ । समयको प्रतिकूलतालाई नबुझि जबर्जस्त गर्नाले पश्चातापमा पार्नसक्ने सम्भावना छ, ख्याल गर्नुहोला । आहारविहारमा होसियारी अप्नाउने र फजुलका विषयमा मन नदिने गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । सामान्य दैनिकी कार्यलाई भने संयमपूर्वक सम्पादन गर्नसक्नु हुनेछ । अप्रत्यासित लाभको पनि सम्भावना छ । आज यहाँलाई आठ अंक, रातो रङ्गको प्रयोग हितकर हुनेछ ।
मीन राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन शारीरिक एवं मानसिक क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । आरोग्यता र हिम्मत–क्षमता भने बढ्ने, दैनिकी कामकार्य तथा पेशाको क्षेत्रमा स्वभाविक सफलता एवं लाभ प्राप्त हुनेछ । शुभेच्छुक जनहरुबाट पनि केही काम लिन सकिनेछ । यात्राको पनि विचार योजना हुनसक्नेछ । प्रतिस्पर्धामा तथा विरोधी उपर विजय प्राप्त हुनेछ । राजनीति, समाजसेवाजन्य क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम हातपार्न सकिने छ । आज तपाईले छ अङ्ग, हरियो रङ्गको उपयोग गर्नु हितकर हुनेछ ।